Allgedo.com » 2012 » June » 01
Home » Archive Daily June 1st, 2012 Qudbaddii uu Xoghaya guud ee Qaramada Midoobay ka jeediyay xafladdii xiritaanka Shirkii Istanbul II ee looga hadlayay arrimaha Soomaaliya. Jun 1, 2012 Istanbul, Turkey (AOL) – Aad baan ugu faraxsanahay waxa aan maqlay maanta oo ah in ay saaxiibada Soomaaliya diyaar u yihiin in ay isgarab taagaan. Inta badan hadalkeyga xiritaanka munaasabadaan waxaan uga hadlayaa in waxa la’isku afgaray sida ay yihiin loo fuliyo.
Marka hore, waxaa naga go’an in aan fulino go’aankeena ah in dowladda KMG ah ee Soomaaliya ee hadda jirta ay ku... Dagaal xoogan oo maanta ka dhacay duleedka degmada Afmadow Jun 1, 2012 Afmadow, Somalia (AOL) – Xoogagga Al-shabaab ayaa maanta duulaan waxay ku qaadeen Degmada Afmadow oo maalintii shalay aheyd u gacan gashay ciidamada Dowladda KMG iyo kuwa Kenya.
Dagaalka oo ka dhacay dhanka Koofur Bari ee duleedka Degmada Afmadow ayaa waxay labada ciidan ee ay dirirtu dhex martay isu adeegsadeen noocyada kala duwan ee hubka, ayada oo waliba daryaanka hubka cul-culus ee ay... UN seeks urgent aid to avoid power vacuum in Somalia Jun 1, 2012 Somalia’s President Sheikh Sharif Sheikh Ahmed (C) and UN Secretary-General Ban Ki-moon (L) in Istanbul (AFP, Bulent Kilic).
ISTANBUL — UN chief Ban Ki-moon called Friday for urgent international aid for Somalia to head off the risk of warlords exploiting a power vacuum after the scheduled change of power in August.
“We urgently need assistance to avoid a power... Qaar ka mid ah cutubyo ka socda AMISOM oo maanta la geeyay Baladweyne Jun 1, 2012 Baladweyne, Somalia (AOL) - Magaala madaxda gobolka Hiiraan ee Baladweyne ayaa maanta waxaa la geeyay ciidamo ka socda dowladda Jabuuti oo qeyb ka ah ciidamo loogu tala galay in ay sugaan nabadda gobolka Hiiraan ee AMISOM.
Cutubyadaan ayaa markii ay yimaadeen garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay mas’uuliyiin isugu jiray maamulka gobolka Hiiraan oo uu mid... Radio Allgedo/ Waraysiyo